တရားစွဲဆိုမှုများအတွက်အန်ဂွီလားပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှမဟာဗျူဟာ
အန်ဂွီလားပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးအန်ဂွီလားပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှနိဒါန်းဖွဲ့စည်း
2014 ၏အန်ဂွီလား Trust မှအက်ဥပဒေများစွာကိုနိုင်ငံများထံမှယုံကြည်မှုကိုဥပဒေများကိုလေ့လာခြင်း၏နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီ။ ဤသည်ဥပဒေသစ်ယုံကြည်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပါသည်ပေးပါသည်။ ကိုး စား. အတော်ကြာအမျိုးအစားများပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. , ကုသိုလ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုး စား. , စီးပွားဖြစ်ယုံကြည်မှုနှင့် spendthrift ယုံကြည်မှုအပါအဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ တည်ထောင်သူ (Settlors) ယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါဥပဒေသစ်ကိုလည်းဂေါပကကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်လူသစ်တွေကိုခနျ့အပျဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူကို (ဂေါပကဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ) တစ်ဦး optional ကိုကာကွယ်ပေးသူကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
အဆိုပါဥပဒေသစ်သည်ထာဝရတည်ရှိထံမှကိုးစားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်ဟောင်းဗြိတိန်အဖြစ်များသည့်ဥပဒေဖြစ်သောတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆန့်ကျင်အဆိုပါနည်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီး။ အခုတော့အန်ဂွီလားကိုး စား. အစဉ်အမြဲဖြစ်နိုင်ပြီးနေသမျှကာလပတ်လုံးကဖြစ်တည်မှုအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရန်ရွေးကောက်အဖြစ်များအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဝင်ငွေစုပြုံနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလှည့်သဘော Ordinance အခြားနိုင်ငံများ '' လှည့်အစီးအနင်းဥပဒေများနှင့်ဆင်တူသည်။ ဤဥပဒေများတရားရုံးတရားစီရင်ပိုင်နှင့်အခြားအကြွေးဆပ်ဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူနိုင်ကြောင်းသော settlor ဆန့်ကျင်ဥပဒေရေးရာတောင်းဆိုမှုများတည်ရှိ (သို့မဟုတ်မကြာမီမျှော်လင့်ထားကြသည်) ဟုသိမှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ရန်ယုံကြည်မှုဖန်တီးခြင်းမှအခြေချကာကွယ်တားဆီးဖို့ရှိပါတယ်။ အန်ဂွီလားသူ / သူမယုံကြည်မှုကိုသို့ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကြောင့်လွှဲပြောင်း၏ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောဖြစ်လာခဲ့သည်အချိန်တွင် (ငွေကြေးဖဲ့) ကို settlor ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောခဲ့တာသက်သေပြရန်အတွက် settlor ၏အကြွေးလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အကြွေးပိုင်ဆိုင်မှုယုံကြည်မှုကိုလွှဲပြောင်းခဲ့သည် နေ့မှစ. သုံးနှစ်အတွင်းသူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များ file ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယုံကြည်မှုကိုပျက်ပြယ်ဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဆိုလွှဲပြောင်းစေနိုင်သည်မတိုင်မီအကြွေးမှတဆင့်ခုန်ရန်အဘို့အခက်ခဲအတားအဆီးဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအန်ဂွီလားအကြွေးက၎င်း၏ကိုး စား. ရန်ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းစိန်ခေါ်များအတွက်အခိုင်အမာတိုင်းပြည်စေသည်။
တစ်ကြွေးရှင်အထက်ဖော်ပြပါလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျမဟုတ်လျှင်တစ်ဦးအန်ဂွီလားတရားရုံးတွင်ပင်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားတိုင်းပြည်ကနေတရားရုံးအမိန့်ဖြင့်တစ်ဦးအန်ဂွီလား Trust မှဆန့်ကျင်မည်သည့်ပြောဆိုချက်ကိုများ၏တရားဝင်မှုအသိအမှတျမရကြလိမ့်မည်:
(ဂ) တစ်ဦးဒေဝါလီခံသို့မဟုတ်မြီစားရဲ့တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ပေးရ '' တောင်းဆိုမှုများ; သို့မဟုတ်
အန်ဂွီလားဟာ Leeward ကျွန်း၏အရှိဆုံးမြောက်ပိုင်းကျွန်းဖြစ်ခြင်းကာရစ်ဘီယံတွင်တည်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်အခြေချအနီးအနားမှာစိန့်ကစ်ကျွန်းကနေပင်လယ်ကူးပြီးနောက် 1650 အတွက်အန်ဂွီလားကိုလိုနီ။ အင်္ဂလန်အစောပိုင်း 19th ရာစုသို့အန်ဂွီလားအုပ်ချုပ်။ 30 အတွက်ဒေသခံတွေပုနျကနျနဲ့ရှုံးနိမ့်တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့စိန့်ကစ်ကနေနှင့်ကျွန်းမှသူတို့ကိုအတင်းအကျပ်သည့်အခါအန်ဂွီလားနေ့, မေလ 1967th အပေါ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်ကြားဝင်နှင့်ခွဲထွက်အစည်းအဝေးများဒီဇင်ဘာလ 19, 1980 သည်အထိဆယ်သုံးနှစ်အဘို့အပေါ်ဆွဲယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့ခြင်းတွင်, အန်ဂွီလားအချို့သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူသီးခြားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပြည်ပနယ်မြေတွေကိုကြေညာခဲ့သည်။
အန်ဂွီလားပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှအကျိုးကျေးဇူးများ
: အန်ဂွီလားပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trusts မှအပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိ
ဒီထက်အခွန်: အဆိုပါ Trust မှ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်လာကတည်းကအားလုံးဝင်ငွေသူတို့ထံမှထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်၎င်းတို့၏တိုးမြှင့်တန်ဖိုးမဲ့ကိုးစားဘဲ settlor သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကပိုင်ဆိုင်သည်။ အမေရိကန်ကလူဒါဒီ tool ကိုများသောအားဖြင့်ကြားနေအခွန်ဖြစ်ပါသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်နေကြသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: သူတို့ရဲ့ privacy ကိုစိတ်ချပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသော Trust မှပဋိညာဉ်စာတမ်းဟာ Settlor သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားရသူများများ၏အမည်များမပါဝင်ပါဘူး။
တစ်သက်တာဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု: Trusts မှသူတို့ထဲကစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုလွယ်ကူအောင်တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းသို့တဦးတည်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရေးရာစုရုံး။
မိသားစုစည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ထိန်းသိမ်းခြင်း: Trusts မှအဆိုပါ settlor ရဲ့သူ / သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အမွေခံနှင့်အတူရွေ့သွားကွယ်ပျောက်အပေါ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဖြူးတစ်ခုစနစ်တကျလုပ်ငန်းစဉ်အားအတူပါလာမှနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက် settlor နှင့်သူ / သူမ၏အမွေခံပြီးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တစ်မိသားစုရဲ့ဥစ္စာဓန၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေး။
တစ်မိသားစုစီးပွားရေးဆက်လက်: အဆိုပါ Trust မှမိသားစုကော်ပိုရေးရှင်း, ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများပိုင်ဆိုင်ထိရောက်စွာလိုအပ်အဖြစ်အမြတ်အစွန်းဖြန့်ဝေစဉ်ကသူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: တစ်ဦးက Trust မှထိရောက်သောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမဟာဗျူဟာတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကတခြားအမျိုးအစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအလိုတော်သို့မဟုတ်လောဘကြီးဆွေမျိုးသားချင်းသို့မဟုတ်ဟောင်းအိမ်ထောင်ဖက်များကစိန်ခေါ်ကြောင်းတဦးတည်းခြင်းမရှိဘဲမည်သေမင်း၏ထောငျခြောရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒါကအမွေခံ၎င်းတို့၏တရားမျှတသောဖြန့်ဝေရအာမခံဖို့ကူညီနိုင်သည်။
Force မှခေံဖွစျတားဆီး: အချို့နိုင်ငံများတွင်မတရားအမွေဥစ္စာကိုဥပဒေများနှင့်အ settlor ၏ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်သံသယရှိသူအမွေခံများကတရားစာဖြင့်ရေးသားဆန္ဒများစိန်ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Trusts မှထိုအအန္တရာယ်ရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စျေးကြီးစမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းအားတားဆီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပင်စင်လစာနှင့်အငြိမ်းစားအစီအစဉ်များ: Trusts မှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်မိသားစုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက်ပုဂ္ဂလိကပင်စင်နှင့်အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမြဲမြံစေရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကုသိုလ်ဖြစ်အကြောင်းရင်းများ: Trusts မှကုသိုလ်ဖြစ်ဖြန့်ဝေဖို့ပတ်သတ်ပြီး settlors '' ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
အနိမ့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းခ: Trusts မှသာအဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အစိုးရသက်တမ်းတိုးအခကြေးငွေနှင့်အတူအစိုးရနှင့်အတူတစ်ချိန်ကမှတ်ပုံတင်ရန်။ အဆိုပါဂေါပကအခမဲ့အတောမသတ်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးကတည်းကဂေါပကများအတွက်နှစ်စဉ်ကြေး, သဘာဝကျကျရှိပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: မှတ်ပုံတင်ခြင်း 24 နာရီထက်လျော့နည်းအတွက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်: တရားဝင်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကယုံကြည်မှုနေသမျှကာလပတ်လုံးကအခြားအလားတူအမည်ရှိဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်မဆို name ကိုသုံးနိုင်သည်။
တစ်ဦးယုံကြည်မှုတရားဝင်ဥပဒေရေးရာ entity မဟုတ်ပါဘူးနေချိန်မှာနေဆဲမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အစိုးရသတိပေးချက်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးလိပ်စာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်မှုကိုတည်တတ်၏သောအခါဤ (ထိုကဲ့သို့သောဒီတစ်ခုကဲ့သို့) သင့်ရဲ့အေးဂျင့်အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ပေးနေပါသည်။
တစ်ဦးကယုံကြည်မှုအနည်းငယ်အဖွဲ့ဝင်များရှိပါတယ်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူ (Settlor) ယုံကြည်မှုကိုဖန်တီးများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတူကရန်ပုံငွေ။ အဆိုပါအကျိုးခံစားရသူများအများအားဖြင့်အမွေခံ (လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်) နှင့် Settlor ဆန္ဒရှိသော်လည်းဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဝင်ငွေများ၏လက်ခံသူများနေသောအခြားအမိသားစုဝင်များနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးက Trustee ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုယ်စားအပေါ်ယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါ Settlor နှင့်အကျိုးခံစားရသူများအခွင့်အရေးများများ၏ဆန္ဒကိုမပြည့်စုံလျက်ရှိသေချာအောင်ဖို့ Trustee ကြီးကြပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင်တစ်ဦးကကာကွယ်ပေးသူ။ များသောအားဖြင့်လူများကလိုအပျသောအပြောင်းအလဲများနှင့်ရန်ပုံငွေအဘို့အတောင်းဆိုမှုများကိုနှေးကွေးသောကြောင့်ကာကွယ်ပေးသူရှိသည်မဟုတ်ရွေးချယ်။ အဆိုပါကာကွယ်ပေးသူအဆိုပါ Settlor နိုင်ပါတယ်။
Trusts မှဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်အရာရှိများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သို့သော်သူတို့ကကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကောင်စီ (တကြ် CPA, ရှေ့နေ, ဘဏ္ဍာရေးစီစဉ်, etc) သူကိုအကြံ Trustee ရှိသည်နှင့်၎င်း Settlor ရဲ့ဆန္ဒကိုအညီနှင့် Trustee နှင့်ကာကွယ်ပေးသူကကြီးကြပ်နေသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလမျးညှနျနိုငျသညျ။
အဆိုပါ Trust မှပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလုပ်န်ထမ်းငှားရမ်းသို့မဟုတ် (စသည်တို့ကိုငှားရမ်းခ, အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson) ဝင်ငွေငွေပေးချေမှုစုဆောင်းဖို့တစ်ရုံးဖွင့်လှစ်လျှင်အရာရှိများရုံးစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
တည်လိမ့်ရန် Trust မှမနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်အရင်းအနှီးရှိပါတယ်။
Trusts မှအခွန်မှဘာသာရပ်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အန်ဂွီလားတစ်ကော်ပိုရိတ်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်ရှိသည်ပါဘူး ကမ်းလွန်ကိုး စား. , သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်း။
Trusts မှသာအစိုးရနှင့်အတူတစ်ချိန်ကမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြောင်းဂေါပကန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်နှစ်စဉ်ကြေးရှိပါတယ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်ခများအတွက်မေးလျှောက်။
အဆိုပါ Trust မှပဋိညာဉ်စာတမ်းဟာ Settlor များ၏အမည်များသို့မဟုတ်သူ၏အမည်များကိုပုဂ္ဂလိကဆက်လက်တည်ရှိသည့်အကျိုးခံစားရသူများမဆံ့မပါဘူးသောအစိုးရ registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းနေသည်သာ။
စာရင်းကိုင်နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်မည်သည့်စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ သို့သော်ယုံကြည်ကိုးစားပါပဋိညာဉ်စာတမ်းပုံမှန်အား Settlor, ကာကွယ်ပေးသူ, လူအပေါင်းတို့မှတ်တမ်းများစစ်ဆေးခြင်းဖို့အကျိုးခံစားရသူများရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အပြည့်အဝစာရင်းကိုင်နှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်စာရင်းကိုင်အလေ့အကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်းပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကကိုးစားလော့ 24 နာရီအတွင်းအစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Trusts မှ
အန်ဂွီလားမကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကိုကိုး စား. ရှိပါတယ်။
အန်ဂွီလားပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trusts မှအပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိ: ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လျော့နည်းအခွန်ငွေ, privacy ကို, တစ်သက်တာဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏ထိန်းသိမ်းခြင်း, မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အငြိမ်းစားအစီအစဉ်များ, ကုသိုလ်ဖြစ်အကြောင်းတရားများ, အနိမ့်မှတ်ပုံတင်ကြေးမြန်ဆန်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါသည် ရုံးသုံးဘာသာစကား။